वित्तिय प्रकार्य भाग दुई
घुसाउनुहोस् - प्रकार्य - बिवरणिका वित्तिय
वित्तिय प्रकार्य भाग एकमा पछाडि जानुहोस्
वित्तिय प्रकार्य भाग तीनमा अगाडि सार्नुहोस्
संचिति ब्याज भुक्तानीहरू गणना गर्दछ त्यो स्थिर ब्याज दरमा आधारित लगानीका लागि जम्मा ब्याज हो ।
दरआवधिक ब्याज दर हो ।
NPer जम्मा अवधिहरूको सङ्ख्या सँगै भुक्तानी अवधि हो । NPER पनि इन्टिजर नभएका मान हुन सक्छ।
PVभुक्तानीहरूको क्रममा हालको मान हो।
Sसुरुको अवधि हो।
Eअन्तिम अवधि हो।
प्रकार हरेक अवधिको सुरु वा अन्त्यमा भुक्तानीहरूको बाकी मिति हो ।
५.५% को ब्याजदरमा वार्षिकी ब्याज भुक्तानीहरू कति हुन्छन्, २वर्षका लागि माषिक भुक्तानी अवधि र ५,००० मुद्रा एकाइको हालको मुद्रा मान कति हुन्छ । सुरु गर्दाको अवधि ४औ र अन्त्य गर्दाको अवधि ६औ हो । सुरुमा प्रत्येक अवधिका लागि भुक्तानी बाँकी हुन्छ ।
=CUMIPMT(5.5%/12;24;5000;4;6;1) = -५७.५४ मुद्रा एकाइ। अवधि ४औ र ६औ बीच का लागि ५७.५४ मुद्रा एकाइ ब्याज भुक्तानी गर्दछ।
अवधिका लागि संचिति ब्याज गणना गर्दछ ।
CUMIPMT_ADD(दर;NPER;Pv;सुरु अवधि;अन्तिम अवधि;प्रकार)
दरहरेक अवधिका लागि व्याजदर हो।
NPer: भुक्तानी अवधिहरूको जम्मा सङ्ख्या हो । दर र NPER ले एउटै एकाइमा सन्दर्भ गर्नुपर्दछ, र यसप्रकार दुवै वार्षिक र मासिक गणना हुनेछ।
PVहालको मान हो
(StartPeriod)सुरुअवधि: गणनाका लागि पहिलो भुक्तानी अवधि।
समाप्तिअवधि(EndPeriod) गणनाका लागि अन्तिम भुक्तानी अवधि।
प्रकार हरेक अवधि (Type = 0) को अन्त्यमा वा अवधि (Type = 1) को सुरुमा भुक्तानीको अवधि हो।
निम्न धितो ऋण घरमा लिएको हो:
दर: ९.० प्रतिशत प्रति वर्ष (९% / १२ = ०.००७५),समय: ३० वर्ष (NPER = ३० * १२ = ३६०), Pv: १२५००० मुद्रा एकाइ ।
कति ब्याज तपाईँंले दोस्रो वर्ष मध्यकालिन (अवधिहरू १३ देखि २४ सम्म)को भुक्तान गर्न जरुरी हुन्छ ?
=CUMIPMT_ADD(०.००७५;३६०;१२५०००;१३;२४;०)ले -१११३३५.२३ फर्काउँदछ ।
कति ब्याज तपाईँंले पहिलो महिनामा भुक्तान गर्न जरुरी हुन्छ ?
=CUMIPMT_ADD(०.००७५;३६०;१२५०००;१;१;०)ले -९३७.५० फर्काउँदछ।
स्थिर ब्याज दर सहित लगानीका लागि भुक्तानी गर्ने संचिति ब्याज फर्काउँदछ।
NPer जम्मा अवधिहरूको सङ्ख्या सँगै भुक्तानी अवधि । NPER पनि इन्टिजर नभएका मान हुन सक्छ ।
प्रकार हरेक अवधिको सुरु वा अन्त्यमा भुक्तानीहरूको बाकी मिति ।
यदि ३६ महिनाका लागि वार्षिक ब्याज दर ५.५% भएको खण्डमा तिर्नु पर्ने रकम कति हुन्छ? नगद मान १५,००० मुद्रा एकाइ हो । तिर्नु पर्ने रकम १०औ र १८औ अवधिको बीचमा गणना गरिन्छ । तिर्नु पर्ने मिति अवधिको अन्त्यमा हो ।
CUMPRINC(5.5%/12;36;15000;10;18;0) = -३६६९.७४ मुद्रा एकाइ। १०औँ र १८औँ अवधि बीचका लागि भुक्तानी गरको रकम ३६६९.७४ मुद्रा एकाइ हो।
ऋणको सन्चिति छुटकारा अवधि गणना गर्दछ ।
CUMPRINC_ADD(दर;NPER;PV;सुरु अवधि;अन्त्य अवधि;प्रकार)
NPer: भुक्तानी अवधिहरूको जम्मा सङ्ख्या हो। दर र NPER ले एउटै एकाइमा सन्दर्भ गर्नुपर्दछ र यसप्रकार दुवै वार्षिक र मासिक गणना हुनेछ।
सुरुअवधि गणनाका लागि पहिलो भुक्तानी अवधि हो ।
समाप्तिअवधि गणनाका लागि अन्तिम भुक्तानी अवधि हो।
दर: ९.०० प्रतिशत प्रति वर्ष (९% / १२ = ०.००७५), समय: ३० वर्ष(भुक्तानी अवधि = ३० * १२ = ३६०), NPV: १२५००० मुद्रा एकाइ
तपाईँंले बन्धक (१३ देखि २४ सम्मको अवधि) को दोस्रो वर्षमा पुन: भुक्तानी कती गर्नु पर्दछ ?
=CUMPRINC_ADD(०.००७५;३६०;१२५०००;१३;२४;०)ले -९३४.१०७१ फर्काउँदछ ।
पहिलो पहिनामा तपाईँंले तलको रकम पुन: भुक्तानी गर्नुपर्ने छ:
=CUMPRINC_ADD(०.००७५;३६०;१२५०००;१;१;०)ले -६८.३२८२७ फर्काउँदछ।
उद्धरणमा रूपान्तरण गर्दछ जसलाई दशमलव सङ्ख्यामा दशमलव भिन्नको रूपमा दिएको हुन्छ ।
आंशिक डलर: दशमलव भिन्नको रूपमा दिएको सङ्ख्या हो।
भिन्न: दशमलब भिन्न हरको रूपमा प्रयोग गरिएको पूरै सङ्ख्या।
=DOLLARDE (१.०२;१६) १ र २/१६ को लागि खडा छ। यसले १.१२५ फर्काउँदछ।
=DOLLARDE (१.१;८) १ र १/८को लागि खडा छ। यसले १.१२५ फर्काउँदछ।
उद्धरणमा रूपान्तरण गर्दछ जसलाई दशमलव सङ्ख्याको रूपमा मिश्रित दशमलव भिन्नना दिएको हुन्छ ।.
DOLLARFR (दशमलव सङ्ख्या;भिन्न)
दशमलव डलरदशमलव सङ्ख्या हो
भिन्न: दशमलब भिन्नको हरको रुपमा प्रयोग गरिएको पूरै सङ्ख्या हो।
=DOLLARFR(1.125;16)ले सोह्रौमा रूपान्तरण गर्दछ। १ जोड २/१६का लागि परिणाम १.०२ हो।
=DOLLARFR(1.125;8) आठौमा रूपान्तरण गर्दछ। १ जोड १/८का लागि परिणाम १.१ हो।
समाहित आवश्यक मानमा लगानीद्वारा आवश्यक अवधिहरूको सङ्ख्या गणना गर्दछ ।
दर:स्थिर हो। जम्मा समय(समय अवधि)का लागि ब्याज दर गणना गर्नु पर्दछ। गणना गरेको समयले ब्याज दरलाई भाग गरेर ब्यादर प्रति अवधि गणना गरिन्छ । वार्षिकीका लागि आन्तरिक ब्याजदर दर/१२ को रूपमा प्रवेश गरिन्छ।
PV: वर्तमान (हालको) मूल्य। नगद मूल्य नगदको निक्षेप हो वा प्रकारमा एउटा भत्ताको हालको नगद मूल्य हो। निक्षेप मानको रुपमा धनात्मक मूल्य प्रविष्टि हुनुपर्दछ; निक्षेप ० वा ० भन्दा सानो हुनु हुदैन।
FV अनुमानित मान हो। भविष्यको मानले आवश्यक भएको (भविष्यत) जम्माको मान निर्धारण गर्दछ।
४.७५% को ब्याज दरमा,नगदमान २५,००मुद्रा एकाइको र १,०००,००० मुद्रा एकाइको भविष्यको मान समय ७९.४९ भुक्तानीको अवधिहरू फर्काईन्छ । भविष्यत मान र समय मार्फत आवधिक भुक्तानी परिणाम भागफल हो यो केसमा १,०००,०००/७९.४९=१२,८५०.२० हुन्छ ।
वर्षमा निश्चित ब्याजदर सुरक्षणको परिमार्जित परिपक्व समय गणना गर्दछ ।
अवस्थापन: सुरक्षणको खरीद मिति ।
म्याद: सुरक्षण समाप्त हुने मिति ।
कुपन:ब्याजको वार्षिक अवास्तविक दर (कुपन ब्याज दर)
उपज: सुरक्षणको वार्षिक उपज ।
आवृति: प्रति वर्ष व्याज भुक्तानीको सङ्ख्या (१, २ वा ४) ।
० वा हराइरहेको छ
१/२/२००१मा सुरक्षण खरीद गरिन्छ; परिपक्व मिति १/१/२००६ हो ब्याजको अवास्तविक दर ८% हो । उपज ९.०% हो । ब्याज भुक्तानी अर्ध-वार्षिकी (आवृत्ति २ हो) गरिन्छ । दैनिक मौज्दात ब्याज गणना (आधार ३) प्रयोग गर्दा परिमार्जित समय कति लामो हुन्छ ?
=MDURATION("1/1/2001"; "1/1/2006"; ०.०८; ०.०९; २; ३)
लगानी श्रृङ्खलाको परिमार्जित आन्तरिक प्रतिफल दर गणना गर्दछ ।
MIRR(मानहरू; लगानी; reinvest_rate)
मानहरू: कक्षहरूका लागि एरे वा कक्ष सन्दर्भहरूमा अनुरूप गर्दछ जसको सामग्री भुक्तानीहरूमा अनुरूप हुन्छ।
लगानी लगानीहरूको ब्याजको दर (एरेका ऋणात्मक मानहरू) हो l
पुनर्लगानी दर:पुनर्लगानीको ब्याजको दर (एरेका धनात्मक मानहरू)
A1= -५, A2 = १०, A3 = १५, र A4 = ८ अनुसारको कक्ष सामग्री, र ०.५ को लगानी मान र ०.१ को पुन:लगानी मान मान्दा परिणाम मान ९४.१६% हुन्छ।
वार्षिक अवास्तविक ब्याज दर दिएको प्रभावकारी दर र प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि गरिएका अवधिको गणना गर्दछ ।
एफेक्टीभ् दरमुनाफाको प्रभावकारी बार्षिक ब्याजदर हो
Npery प्रति वर्ष व्याज भुक्तानीको सङ्ख्या हो।
यदि प्रति वर्ष बाह्रवटा भुक्तानीहरू बन्छन् भने १३.५% को प्रभावकारी ब्याज दरका लागि प्रति भर्ष अवास्तविक ब्याज कति हुन्छ ।
=NOMINAL(13.5%;12) = १२.७३%। अवास्तविक ब्याज दर प्रति वर्ष १२.७३% हुन्छ।
प्रभावकारी दरको आधारमा ब्याजको वार्षिक वास्तविक दर गणना गर्दछ ब्याज दर प्रतिवर्ष भुक्तानी गरिन्छ ।
५.३५४३% प्रभावकारी ब्याज दर र त्रैमासिक भुक्तानी का लागि ब्याजको अवास्तविक दर कति हो ।
=NOMINAL_ADD(५.३५४३%;४)ले ०.०५२५ वा ५.२५% फर्काउँदछ ।
दरएक अवधिकालागि छुट दर हो ।
NPV(8.75%;10;20;30) = 49.43 मुद्रा एकाइ। खुद वर्तमान मूल्य फर्काएको मूल्य माइनस ४० मुद्रा एकाइको सुरु लागत हो, बराबर ९.४३ मुद्रा एकाइ हुन्छ।
स्थिर ब्याजदरहरू सहित वार्षिकीका लागि आवधिक भुक्तानी फर्काउँदछ ।
PMT(दर; NPER; PV; FV; प्रकार)
NPer वार्षिकी भुक्तानी गर्नुपर्ने दिनहरूको सङ्ख्या हो।
PV: भुक्तानीहरूको क्रममा वर्तमान मूल्य (नगद मूल्य)।
FV (वैकल्पिक): (भविष्य मान) आवधिक भुक्तानीहरूको अन्त्यमा बढाइने आवश्यकता परेको मान हो।
प्रकार (वैकल्पिक)आवधिक भुक्तानीहरूका लागि बाँकी मिति। प्रकार=१ सुरुको भुक्तानी हो र प्रकार=0 प्रत्येक अवधिको अन्त्यमा भुक्तानी हो।
यदि भुक्तानी अवधि तीन वर्ष र नगद मान २५,००० मुद्रा एकाइ हो भने 1.99% को वार्षिक ब्याज दरमा आवधिक भुक्तानी कति हुन्छ।त्यहाँ ६ भुक्तानी अवधिहरूको रूपमा ३६ महिनाहरू हुन्छन्, र ब्याज दर प्रति भुक्तानी 1.99%/12 हुन्छ ।
PMT(१.९९%/१२;३६;२५०००) = -७१५.९६ मुद्रा एकाइ । त्यसकारण आवधिक मासिक भुक्तानी ७२५.९६ मुद्रा एकाइ हुन्छ ।
लगानीका लागि मूलधनमा दिएको अवधिमा फर्काउँदछ ।
अवधि भनेको ऋण चुक्ता हुने अवधि हो P=१ पहिलो वर्षका लागि P=NPer अन्तिम वर्षका लागि।
NPer वार्षिकी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधिहरूको सङ्ख्या हो।
PV भुक्तानीहरुको अनुक्रममा वर्तमान मूल्य (नगद मूल्य) हो।
FV (वैकल्पिक) इच्छित (भविष्य) मान हो।
प्रकार (वैकल्पिक)ले बाँकी मिति परिभाषित गर्दछ । F=१ वर्षको सुरुमा भुक्तानी गर्नका लागि र F=० अवधिको अन्त्यमा भुक्तानीका लागि ।
८.७५% को वार्षिक ब्याज दरमा आवधिक मासिक भुक्तानी ३ वर्षको अवधि समेट्ता कति हुन्छ। नगद मान ५,००० मुद्रा एकाइ हो र प्राय जसो अवधिको सुरुमा भुक्तानी हुन्छ। भविष्यको मान ८,००० मुद्रा एकाइ हुन्छ।
PPMT(८.७५%/१२;१;३६;५०००;८०००;१) = -३५०.९९ मुद्रा एकाइ।
उपज पूर्वानुमानको प्रकार्य स्वरूप १०० मुद्रा एकाइको अंकित मान सहित स्थिर ब्याज सुरक्षाको बजार मान गणना गर्दछ ।
दर: वार्षिक सांकेतिक ब्याजको दर (कुपन ब्याज दर)
रिडेम्सन सुरुआत मानको रिडेम्सन मूल्य प्रति १०० मुद्रा एकाइहरू हो।
२/१५/१९९९ मा खरीद गरेको सुरक्षा, ३/१५/२००७ मा परिपक्व मिति हो । छुट प्रतिशतमा ५.७५% हुन्छ उपज ६.५% । छुटकारा मान १०० मुद्रा एकाइ हो । ब्याज प्रत्येक छ महिनामा (आवृत्ति २) भुक्तान गर्दछ , गणना आधार ० सहित मूल्य तल दिएको छ:
=PRICE("2/15/1999"; "11/15/2007"; 0.0575; 0.065; 100; 2; 0) ले ९५.०४२८७ फर्काउँदछ ।
ब्याज नबेहोर्ने सुरक्षाको अंकित मानको मूल्य १०० मुद्राको एकाइ गणना गर्दछ ।
छुटप्रतिशतको रूपमा सुरक्ष्याको छुट हो .
२/१५/१९९९ मा खरीद गरेको सुरक्षण,३/१/१९९९मा परिपक्व मिति हो । छुट प्रतिशतमा ५.२५% हुन्छ । छुटकारा मान १०० हो । जब आधार २मा गणना गर्दा तलको छुट मूल्य हुन्छ:
=PRICEDISC("2/15/1999"; "3/1/1999"; 0.0525; 100; 2)ले ९९.७९५८३ फर्काउँदछ ।
सुरक्षणको अंकित मानको मूल्य प्रति १००मुद्रा एकाइ गणना गर्दछ त्यसले परिपक्व मितिमा ब्याज भुक्तानी गर्दछ ।
मुद्दा सुरक्षणको मुद्दा मिति हो।
दर: निस्काशन मितिमा सुरक्षणको व्याजदर हो।
बन्दोबस्त मिति: फरवरी १५ १९९९,परिपक्व मिति: अप्रिल १३ १९९९, निस्काशन मिति:नोभेम्बर ११ १९९८ । ब्याल दर: ६.१ प्रतिशत, उपज: ६.१ प्रतिशत आधार:३०/३६०=० हुन्छ ।
मूल्य तल गणना गरिन्छ:
=PRICEMAT("2/15/1999";"4/13/1999";"11/11/1998"; 0.061; 0.061;0)ले फर्काउँदछ ।
एक अवधिका लागि सम्पतिको सीधा-रेखा ह्रास कट्टी फर्काउँदछ ।यो ह्रास कट्टीको रकम ह्रास कट्टी अवधि भरीका लागि स्थिर हुन्छ ।
लागत एउटा सम्पत्तिको सुरुआत लागत हो ।
बचेको ह्रास कट्टीको अन्त्यको बचेको मूल्य हो ।
Life मूल्यह्रास अवधि हो जसले सम्पत्ति को मूल्यह्रास हुने अवधि को संख्या निर्धारण गर्छ​।
५०,००० मुद्राएकाइको सुरु लागत सहित कार्यालय औजार ७ वर्ष सम्म ह्रास कट्टी गर्न सकिन्छ । मान ह्रास कट्टीको अन्त्यमा ३,५०० मुद्रा एकाइ हुन्छ ।
=SLN(50000;3,500;84) = 553.57 मुद्रा एकाइ। कार्यालय उपकरणको आवधिक मासिक मूल्यह्रास 553.57 मुद्रा एकाइ हो।
छुट: सुरक्षणको उपार्जनमा छुट प्रतिशत ।
बन्दोबस्त मिति: मार्च ३१ १९९९,परिपक्व मिति: जुन ३१ १९९९, छुट: ९.१४ प्रतिशत ।
ट्रेजरी बिलमा पाउने प्रतिफल सुरक्षामा अनुरूप हुन्छ जसलाई तल गणना गरिन्छ:
=TBILLEQ("3/31/99";"6/1/99";०.०९१४)ले ०.०९४१५१ प्रतिशत वा ९.४१५१ प्रतिशत ।
ट्रेजरी बिल प्रति १०० मुद्रा एकाइको मूल्य गणना गर्दछ ।
छुट: प्रतिशत छुट लगभग सुरक्षणको उपार्जन हो ।
बन्दोबस्त मिति: मार्च ३१ १९९९,परिपक्व मिति: जुन १ १९९९, छुट: ९ प्रतिशत.
ट्रेजरी बिलको मूल्य तल भुक्तानी गरिन्छ:
=TBILLPRICE("3/31/99";"6/1/99"; ०.०९)ले ९८.४५ फर्काउँदछ ।
ट्रेजरी बिलको उपज गणना गर्दछ ।
मूल्य मानको १०० मुद्रा एकाइको ट्रेजरी बिलको मूल्य (खरीद मूल्य)।
बन्दोबस्त मिति: मार्च ३१ १९९९, परिपक्व मिति: १,१९९९, मूल्य:९८.४५ मुद्राएकाइ ।
ट्रेजरी बिलको उपज तल गणना गरिन्छ:
=TBILLYIELD("3/31/99";"6/1/99"; ९८.४५) ले ०.०९१४१७ वा ९.१४१७ प्रतिशत ।
सुरक्षणको उपज गणना गर्दछ ।
दर वार्षिक व्याजदर हो।
मूल्य: अंकित मूल्य सुरक्षण प्रति १०० मुद्रा एकाइको (खरीद मूल्य) मूल्य।
रिडेम्सन अंकित मूल्यको रिडेम्सन मूल्य प्रति १०० मुद्रा एकाइ हो।
२/१५/१९९९मा खरीद गरिन्छ । यो ११/१२/२००७ मा परिपक्व हुन्छ । ब्याज दर ५.७५% हो । मूल्य अंकित मानको ९५.०४२८ मुद्रा एकाइ प्रति १००एकाइ पर्दछ । ब्याज अर्ध वार्षिक (आवृत्ति=२) भुक्तानी गरिन्छ र आधार ० हुन्छ । उपजको उचाइ कति हुन्छ ?
=YIELD("2/15/1999"; "11/15/2007"; ०.०५७५ ;९५.०४२८७; १००; २; ०)ले ०.०६५ वा ६.५ प्रतिशत फर्काउँदछ ।
ब्याज वहन गर्नु नपर्ने सुरक्षणको वार्षिक उपज वहन गर्दछ ।
रिडेम्सन: अंकित मूल्यको रिडेम्सन मूल्य प्रति १०० मुद्रा एकाइ हो।
२/१५/१९९९मा ब्याज जोखिम वहन गर्नु नपर्ने सुरक्षा बहन गरिन्छ । यो ३/१/१९९९मा परिपक्व हुन्छ । यसको मूल्य अंकित मानको ९९.७५९ मुद्रा एकाइ प्रति १०० एकाइ हुन्छ । छुटकारामान १०० एकाइ हो । आधार २ हो । उपज कति हुन्छ?
=YIELDDISC("2/15/1999"; "3/1/1999"; ९९.७९५; १००; २)ले ०.५२८२३ वा ५.२८२३ प्रतिशत फर्काउँदछ ।
सुरक्षणको वार्षिक उपज गणना गर्दछ जसको ब्याज परिपक्व मितिमा भुक्तानी गरिन्छ ।
दरनिस्काशन मितिमा सुरक्षणको व्याजदर हो।
मूल्य: अंकित मूल्य सुरक्षण प्रति १०० मुद्रा एकाइको (खरीद) मूल्य।
३/१५/१९९९ खरीद गरेको सुरक्षा । यो ११/३/१९९९मा परिपक्व हुन्छ । मिति ११/८/१९९८मा निस्काशन भएको थियो । प्रतिफल ब्याज दर ६.२५% छ,मूल्य १००.०१२३ एकाइ हुन्छ । आधार ० हो । उपज कति उच्च हुन्छ ?
=YIELDMAT("3/15/1999"; "11/3/1999"; "11/8/1998"; ०.०६२५; १००.०१२३; ०)ले ०.०६०९५४ वा ६.०९५४ प्रतिशत ।
Title is: वित्तिय प्रकार्य भाग दुई